Tonsai Rano, Phuket ~ Journey-Assist - mahaliana
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Phuket » Tonsai Rano
Tonsai Rano, Phuket
Ny fijerin'ny riandranon'i Tonsai ao Phuket
Tonsai Waterfall ao amin'ny sari-tany. Ahoana no hahatongavana any.
Sary sy horonan-tsary Tonsai
Valiny ho an'ny Tonsai Waterfall ao Phuket (valin'ny Google)
Famerenan'ny Tonsai Waterfall ao Phuket (Tripadvisor.ru)
Tonsai Waterfall - ny riandrano faharoa lehibe indrindra aorian'ny fitrandrahana Bang pe. Ary ny roa amin'ireo riandrano roa ireo dia hita ao amin'ny faritry ny kanto mahafinaritra Thao Phra Theo National Park.
Avy amin'ny renirano iray mankany amin'ny hafa iray dia misy lalambe iray izay manakatona ny mpizahatany amin'ny ala, maharitra 4 km. Nakatona ara-panoharana io (famantarana ny "mpiasa tokana"), izay indraindray ny mpizahatany mankasitraka ny fialan-tsasatra mahery vaika amin'ny alàlan'izany dia mandamina ny tena fanarahana amin'ny ala. Misimisy kokoa momba ny "mandeha" toy izany eto.
Ny riandrano Tonsai, kely, dia andian-kafatra, valan-javaboary iray azo ampiharina ao anaty ala mikitroka. Ny cascade tsirairay dia toa miavaka. Ary amin'ny ankapobeny, ny riandrano dia mendrika mendrika fitsidihana, satria ny toetra sy ny rivotra dia tena mahaliana.
Misy koa ny dobo noforonin'ny riandrano iray, izay milomano ny trondro ary na dia ny sokatra izay azonao zakaina.
Misy dobo filomanosana ao, ary na dia ao anaty riandrano aza dia mety milomano ihany koa. Tena mangatsiaka ny rano eo.
Ny vidin'ny fitsidihana ny Tondra-drano Tonsai
Hatramin'ny misy ao amin'ny zaridainam-pirenena ny riandrano dia voaloa ny vidin'ny fidirana ary mitentina 200 baht. Ho an'ny ankizy 100 baht.
Amin'ny fidirana dia misy ny fotodrafitrasa ilaina rehetra ho an'ny mpitsidika. Toilet, fivarotana, trano fisotroana, fiantsonana dia malalaka be ary maimaim-poana.
Ny fitsidihana ny faritr'i Tonsai dia ho mahaliana indrindra mandritra ny fotoanan'ny orana. Avy eo, ny riandrano dia mijery fotoana mampitolagaga sy lehibe kokoa noho ny vanin-taona mafana.
Fampahalalana mifandray. Ahoana no hahatongavana any.
Address: Thep Krasatti, Distrikan Thalang, Phuket 83110, Thailand
Fidirana amin'ny zaridaina manodidina ny famantaranandro, fa mahitsy, ny ala mikiky ny alina dia tsy toerana mahafinaritra indrindra mandehandeha amin'ny volana 🙂
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ireo mpanamory https://goo.gl/maps/utkFS2gAmu83g1ci9
Tonsai Waterfall ao amin'ny sari-tany
Tonsai Rano, Phuket. Sary sy horonan-tsary
Hevitra ho an'ny Waterfall Tonsai any Phuket (famerenana Google)
Ary mangatsiatsiaka noho ny fahasamihafana misy ny riandrano. Ary ny Nature dia misy ny ala, super-duper fotsiny. Ary ny fitsangatsanganana an'ity riandrano mankany amin'ny riandranon'i Bang Pae ity dia sangan'asan'ny hazakazaka any anaty ala fotsiny!
Ary mazava ho azy dia mila mitsidika izany ny tenanao ho anao, ary tsy ampahany amin'ny fizahan-tany.